URohtos Suoja iipilisi zokuthintela i-hangover ekuthengiseni i-intanethi, ukuthumela umhlaba jikelele | Metropolitan.fi
URohtos Suoja iipilisi zokuthintela i-hangover ekuthengiseni i-intanethi, ukuthumela umhlaba jikelele
I-Rohtos Labs yinkampani eklanywayo kunye nokuvelisa izondlo zokutya. Enye yeemveliso iinkampani ezithi ziyenzile zithe zenyuka neyonyango.
Ngaphambili ifunyenwe kuphela eFinland iipilisi zeRohtos Suoja zifumaneka ngokubanzi kwi-intanethi ye-intanethi.
Ngokusekelwe kwisixeko esisentla esisenyakatho sase-Oulu, eFinland - iRohtos Labs ixhomekeke kwimveliso yazo malunga nokuqonda okutsha kwe-biochemistry kunye neyeza zamakhemikhali. Inkampani eyimfihlo nayo isebenza ngokusondeleyo neYunivesithi yaseOulu.
IRohtos Labs idiza iimveliso ezenziwe kwiimveliso zendalo. Ngokudibanisa inzululwazi yanamhlanje kunye nophando lwangomso lwamaNdiya aseAsia (i-Ayervedic, i-TCM), inkampani iklanyelwe iimveliso ngeemeko ezininzi. Bonke babelana ngesingqinisiso sokulinganisa i-chemistry yomzimba ngokusebenzisa izondlo ezithile.
Into ebalulekileyo yesikhumbisi yi-acetaldehyde
NgoJuni ka-2017 inkampani yamemezela ukuba yimveliso yabasebenzisi bezotywala. Imveliso yakhiwe kwinto yokuba ukuxiliswa kotywala kuvelisa ikhemikhali ebizwa ngokuthi i-acetaldehyde. Le ngxube ekhangela kakhulu umzimba ngaphezu kwe-ethanol (ukusela utywala) kwaye isizathu esona sizathu sokubakho kokusela kotywala kotywala.
Isibindi sivelisa i-glutathione ukuze i-acetaldehyde, kodwa isibonelo sendalo sesibindi siphume emva kweeyunithi ezimbini zotywala. Oku kukhokelela kumzimba ogcwele i-acetaldehyde. Iipilisi zeRohtos Suoja ezongezelelweyo zijolise ekubuyiseleni le mali. Imveliso kufuneka isetyenziswe ngaphambi kokusela utywala kwaye ayiyilungiselelo le-hangover.
Oku kwenziwa ngokudibanisa izithako ukukhuthaza imveliso yemvelo ye glutathione. I-antioxidants kunye namavithamini zongezwa ukubuyisela ezinye ukungalingani kwemichiza ezenzekayo xa kudla amaninzi otywala.
URohtos Suoja okwangoku uqhutyelwa izifundo zesayensi eziyimpumputhe ukuba zilinganise izibonelelo zemveliso. Abasebenzisi be-supplementary supplement baye babika ukunciphisa imiphumo yengozi phakathi kwama-70-75% emva kokusetyenziswa kakhulu kotywala.
Uvavanyo olungafanelekanga lwamaxesha angama-7 olulandelelanayo lokunwa kwintlanganiso yaseTuska ngo-2017 ukusetyenziswa kweRohtos Suoja kwaphumela ekunciphiseni okukhulu kweempawu zokuxilwa emva kokusela. Ukutya i-pizza kunye nokutya okukhawulezayo emva kwentsasa emva kwancipha. Ngaloo ndlela i-weightloss kunye nokuphucula ukuzithemba kungase kube yimiphumo emihle kubasebenzisi bexesha elide.
Ukondla okwaneleyo kwamanzi kubaluleke kakhulu ukunciphisa ukukhathala ngokomzimba obangelwa ukusela utywala. I-Ethanol igqubuthela umzimba. Ukusela amanzi phakathi kweziphuzo kwaye ngaphambi kokulala kuphakanyiswa kakhulu ukunciphisa imiphumo yengozi.
Ukuthenga uRohtos Suoja online, ukuthumela umhlaba jikelele
URohtos Suoja uchazwa njengesongezelelo sokondla esithi "Ukhusela ingqondo nomzimba xa usela utywala kwaye unciphisa i-hangover ebizwa ngokuba yi-hangover ngosuku olulandelayo."
Imveliso yayisetyenziswa kuphela eFinland, kodwa ukususela ngoJanuwari 2018 uRohtos Suoja kunye nezinye iimveliso ngoku ziyafumaneka kwiintengiso ze-intanethi kwilizwe lonke e-Afrika, e-Asia, e-Australia, e-Yurophu, eMntla Melika, eMzantsi Melika.
Imveliso ivela kwiununithi zeepilisi ezingama-30, ezaneleyo ukuya kwi-10-15 ngexesha lokusela ngokuxhomekeke kumyinge. Ixabiso leyunithi i-€ 23.90 (malunga needola ezingama-30) kunye nentlawulo. Intlawulo ingenziwa ngekhadi le-Visa, MasterCard kunye ne-American Express okanye nge-Paypal.
I-Rohtos Labs inikezela ngemveliso yesiqinisekiso sokubuyisela imali-abasebenzisi abanganelisekanga bangazibuyisela iifomsile ezingasetyenziswanga ukubuyisela imali epheleleyo. Imiyalelo inokuyenza kwivenkile esemthethweni ye-intanethi yesitolo kwi-rohtoslabs.com
URohtos Suoja ngumveliso wemvelo owaveliswa waza waveliswa eFinland, ilizwe laseMntla Yurophu. Inkcazo yemveliso iluhlu lwezinto ezilandelayo zendalo ezisetyenziswa kwimveliso (umthamo wee-capsules 3):
I-Nopal Cactus Extract: 440 mg
I-acetyl cysteine: 330 mg
I-Vitamin C (ascorbic acid): 330 mg
Ukukhipha umlenze we-Milk: 165 mg
I-Alpha-GPC: 165 mg
I-ALA (i-alpha-linoleic acid): 110 mg
I-Zinc (i-sulphate monohydrate): 110 mg
I-Pyritrinol: 55 mg
I-Vitamin E: 35 mg
I-Vitamin E (i-thiamine monotriate): 15 mg
I-Vitamin B2 (riboflavin): 15 mg
I-Vitamin B6 (P-S-P): 10 mg
Iipiperine: 10 mg
I-Vitamin B9 (folic acid): 1 mg
Selenium: 0.07 mg
I-Vitamin B12 (methylcobalamin): 0.05 mg
« Rohtos Suoja põlengute ennetamise pillid müügil online, laevandus ülemaailmselt - Rohtos Suoja hangover amaphilisi okuvimbela ekuthengisweni ku-inthanethi, ukuthumela emhlabeni wonke »